जर्ज वासिङ्गटनः समयको महत्व बुझौं, पल पलको समय खेर नफालौं
पाेखरा २७ पुस अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति हुन् – जर्ज वासिङ्गटन । उनलाई समयको महत्व अत्यन्तै बुझ्ने मानिसको रूपमा विश्वभर उदाहरण स्वरूप प्रयोग गरिन्छ । उनलाई समयको मूल्य थाहा थियो । यसैले सदैव आफ्नो एक–एक पलको सदुपयोग गर्थे ।
एक पटक उनले कुनै अबसर पारेर आफ्ना केही केही साथीहरुलाई भोजनका निम्ति निमन्त्रणा गरका थिए । समय दिनको ३ बजेको थियो । संयोगवश पाहुनाहरू त्यो समयमा आएनन् तब उनले एक्लै खाना खान सुरू गरे ।
समय भन्दा केही ढीला गरेर पुगेका पाहुनाहरूलाई त्यो देखेपछि नराम्रो लाग्यो । जर्ज वाशिंगटनले भने– क्षमा गर्नुस् । खाना टेबलमा लगाउनु अगाडि मेरो भान्सेले यो सोध्दैन कि पाहुना आए या आएनन्, केवल यो सोध्छ समय भयो या भएन ? उनको यस्तो कुरा सुनेर पाहुना लज्जित भए ।
सामान्यतया मानिसलाई ठूला सभा समारोहमा मात्र नभइ स–साना कार्यक्रमहरुमै पनि अगाडी गएर के बोल्ने कसरी बोल्ने भन्ने कुराको डर लागिरहेको हुन्छ । अझ कहिल्यै नबोल्नेहरुले त झनै गाह्रो महशूस गर्ने गर्छन् ।
कहिलेकाँही अगाडी गएर बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने कहिलेकाही त्यो अवसर पनि आउँछ । तर अगाडी गएर बोल्दा बोली, खुट्टा, हात काप्ने, बोल्दा बोली बिग्रने जस्ता डरले पछाडी हटिरहनु भएको त छैन ।
डरलाई यसरी कम गर्नुस् :
१. अगाडी गएर बोल्ने कुरालाई मात्र दिमागमा राख्नुहोस् । समय भएमा संगीत सुन्ने या वरीपरिका व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्ने, कार्यक्रममा मनोरञ्जनात्मक कार्य भएमा सहभागि हुने गर्नुस् । त्यसो गर्दा तपाईको दिमाग अन्यत्र बाडिन्छ र तपाई नर्भस हुनु भएको छ भने त्यसमा कमी आउँछ ।
२. सबैभन्दा पहिले भाषा र बोल्ने शब्द बिग्रने डर हुन्छ । हरेक व्यक्तिको विशेषता फरक–फरक हुन्छ । तपाईले अर्को व्यक्ति नै जसरी बोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण अरुको जस्तो देखिन्न कि भन्ने डरलाई त्याग्नुस् । नक्कल गर्न खोज्नुभएमा बिग्रने डर हुन्छ । आफ्नै शैलीमा प्रस्तुती दिनुभएमा आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ ।
३. बोल्नका लागि अगाडी जानुभन्दा पहिले लामो श्वास लिने र फ्ँयाक्ने गर्नुस् । यसो गर्दा तपाईको दिामगलार्य शान्ति मिल्छ । त्यो एक किसिमको मेडिटेसन बन्छ र तपाईको दिमाग फ्रेस हुन्छ । जसले गर्दा डर पनि कम हुन्छ ।
४. प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएपनि खाना र पोशाकले तपाईको प्रस्तुतीमा प्रभाव पार्छ । अतालिँदा कोही व्यक्तिलाई टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, रिंगटा लाग्ने जस्ता समस्या देखिन्छन् । स्वस्थ खाना र शरीरमा प्रशस्त मात्रामा पानीको मात्रा भएमा यी समस्या कम हुन्छन् । त्यस्तै समय र परिस्थितीअनुसारको पोशाक भएमा आत्मविश्वास आफैं बढ्ने गर्छ ।